Agromart | Agricultural Marketplace Nepal सुन्तला खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. सुन्तला खेती कस्तो किसिमको हावापानीमा राम्रो हुन्छ ?
Q 2. यसको खेती समुह सतहबाट कति उचाईसम्म हुन्छ ?
Q 3. यसलाई तापक्रम कतिसम्म भए राम्रो होला ?
Q 4. यसको खेतीको लागि वार्षिक वर्षा कतिसम्म भएमा राम्रो हुन्छ ?
Q 5. हावाको वहावले सुन्तला खेतीलाई कतिको असर गर्दछ ?
Q 6. यसको खेती कस्तो किसिमको माटोमा फस्टाउदछ ?
Q 7. यसको खेती गर्दा जमीनको मोहडालाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ?
Q 8. नेपालमा सुन्तलाका कुन कुन जातहरु पाईन्छन् ?
Q 9. खोकु स्थानीय सुन्तलाको विशेषता के हुन ?
Q 10. ओकित्सुवासेको विशेषताको बारेमा बताई दिनु हुन्थ्यो कि ?
Q 11. मरकट जातको विशेषताको पनि जानकारी गराई दिनु हुन्थ्यो कि ?
Q 12. सुन्तलाका बिरुवा कसरी उत्पादन गरिन्छ ?
Q 13. न्यूसेलार बिरुवा भनेको के हो ?
Q 14. वानस्पतिक विधिमा कुन कुन विधिहरु सुन्तला बिरुवा उत्पादन गर्नमा प्रयोग गरिन्छ ?
Q 15. सूट टीप ग्राफ्टीङ्ग विधिबाट बिरुवा कसरी प्रसारण गरिन्छ ?
Q 16. सुन्तलाका बिरुवाहरु बगैंचामा कुन तरीकाले लगाउनु उचित होला ?
Q 17. सुन्तलाका बिरुवाहरु कति दुरीमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 18. सुन्तलाका बिरुवा कति उमेर र उचाईका हुनु पर्दछ ?
Q 19. बिरुवा लगाउने खाडल कति गहिरो खन्नु पर्ला ?
Q 20. सुन्तलाका बिरुवा रोप्दा प्लान्टिङ्ग बोर्ड÷बिरुवा रोप्ने फल्याकको आवश्यकता हुन्छ ?
Q 21. बिरुवा रोपी सकेपछि टेका दिन जरुरी हुन्छ ?
Q 22. बिरुवा लगाउनासाथ पानी दिन।सिंचाई गर्न जरुरी छ ?
Q 23. बगैंचामा लगाईएका बिरुवालाई मल्चिङ्ग/छापो दिन किन जरुरी हुन्छ ?
Q 24. सुन्तलाको बिरुवाबाट सकर/चोर हाँगा हटाउने भनेको के हो ?
Q 25. सुन्तलाका बोटलाई तालिम र काँटछाँटको जरुरी हुन्छ ?
Q 26. सुन्तलाको बोटलाई कसरी तालिम र काँटछाँट गरिन्छ ?
Q 27. सुन्तलाको काँटछाँट कुन समय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 28. सुन्तलाका फलहरु कुन–कुन अवस्थामा झर्दछन् ?
Q 29. फलको कोपिला अवस्था कुन समयमा हुन्छ र के कारणले फलहरु झर्दछन् ?
Q 30. केराउ दाना अवस्था कुन समयमा आउछ र के कारणले फलहरु झर्दछन् ?
Q 31. बगैंचाको सरसफाई गर्दा कुन–कुन काममा विशेष ध्यान पुर्यानउनु पर्दछ ?
Q 32. सुन्तलाको बिरुवामा कति मात्रामा मलखाद दिनु पर्दछ ?
Q 33. सुन्तलाको बिरुवालाई कुन अवस्थामा सिंचाईको बढी आवश्यकता पर्दछ ?
Q 34. सुन्तला बिरुवामा कस्ता–कस्ता कीराहरुले आक्रमण गर्दछन् ?
Q 35. कत्ले कीराले बिरुवालाई कसरी नोक्सानी पुर्यााउँछ?
Q 36. कत्ले कीराको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 37. फल कुहाउने औंसाले कसरी नोकसानी पुर्याउँछ ?
Q 38. फल कुहाउने औंसालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
Q 39. सिट्रस सिल्ला कीराले कसरी नोक्सानी पुर्याएउँदछ ?
Q 40. सिट्रस सिल्लाको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 41. सुन्तलामा ह्रास रोग/सिट्रस डिक्लाईन रोग भनेर नीकै चर्चा गरिन्छ वास्तवमा यो रोग कसरी लाग्दछ ?
Q 42. सुन्तलामा लाग्ने यस्तो बिनासकारी रोगबाट कसरी बिरुवालाई बचाउन सकिन्छ ?
Q 43. सुन्तलाका फलहरु टिपे पश्चात नोक्सानी बढी नै नोक्सानी हुन्छन् ?
Q 44. सुन्तलाका फलहरु कस्तो अवस्थामा टिप्नु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 45. सुन्तलाका फलहरु ग्रेडिङ्ग गर्न जरुरी हुन्छ ?
Q 46. सुन्तला फललाई भण्डारण गर्ने प्रविधि के छ ?
Q 47. शीतभण्डारमा कति समयसम्म फल भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
Q 48. सुन्तलामा कस्ता–कस्ता रोगहरुको प्रकोप पाईन्छ ?
Q 49. सुन्तलाको ग्रिनिङ्ग रोग कसरी लाग्दछ ?
Q 50. यो रोग लाग्न नदिन के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ ?
Q 51. जरा तथा फेद कुहिने रोग कसरी लाग्दछ ?
Q 52. यस रोगको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 53. सुन्तलामा लाग्ने धेरै रोगहरुको बिरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिने कुनै त्यस्तो विषादी छ ?